Sidee ayuu luqadda Ingiriiska ugu hadlaa saxiixa cusub ee Man United Bruno Fernandes? – Daniel James ayaa ka jawaabaya – Gool FM
Sidee ayuu luqadda Ingiriiska ugu hadlaa saxiixa cusub ee Man United Bruno Fernandes? – Daniel James ayaa ka jawaabaya
Haaruun February 10, 2020
(Manchester) 10 Feb 2020. Daniel James ayaa ku adkaysanaya saxiixa cusub ee Man United, Bruno Fernandes inuu si wanaagsan ula qabsan doono isla markaana uu durba soo jiitay asxaabtiisa cusub ee garoonka Old Trafford.
Xiddiga khadka dhexe ee reer Portugal Fernandes ayaa qalinka ku duugay heshiis shan sano iyo bar ah oo uu kula sii joogayo Manchester United kaddib markii kooxda ka ciyaarta Premier League ay heshiis 68 milyan oo gini ah kaga soo qaateen Sporting Lisbon.
25-sano jirkaan ayaa kulankiisii ugu horreysay u saftay Man United ciyaartii ay barbaraha goolal la’aanta ah la galeen Wolves isbuucii hore.
“Wuxuu kooxda ula qabsanayaa si weyn.” ayuu James u sheegay MUTV mar wax laga waydiiyay saaxiibkiisa cusub ee kooxda.
“Waan ogahay waxaa jira ciyaartooy yar kuwaas oo ku hadla luuqaddiisa, isaguna si wanaagsan ayuu ugu hadlaa luuqadda English-ka”.
“Waxaan aaminsanahay in si dhaqsi leh uu kooxda ula qabsaday, marka loo fiiriyo qaab ciyaareedkii uu soo bandhigay kulankiisii ugu dambeeyay.”
Red Devils ayaa wali qeyb ka ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan qaaradda Yurub ee Europa League iyo sidoo kale FA Cup-ka, James ayaa indho-indheynaya in Kooxdiisa uu ugu yaraan kula guuleysto koob ka hor dhammaadka xilli ciyaareedka.
“Haa, waxay la macno tahay wax walba,” ayuu yiri xiddiga reer Wales ee Daniel James, waxaana uu hadalkiisa sii raaciyey: “Taasi waa sababta aan ugu suganahay kooxdan, inaan ku guuleysto koobab, labadeennaba waxaan fursad u heleynaa in aan ku guuleysano koobab.”
Kabtanka Kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos oo xalay sameeyey rikoor weyn kaddib markii uu gool ka dhaliyey Osasuna
Kooxda Manchester United oo hoos u dhigtay xiisihii ay u qabtay James Maddison